Iindaba -Ulungelelanisa njani i-clutch kunye ne-throttle?
Hand waqhekeza Valve
Iintsimbi `` Scania ''
Indlela yokulungelelanisa i-clutch kunye ne-throttle?
Ungasebenzisana njani ne-clutch kunye ne-throttle?
Okokuqala, iigesi kufuneka zikwimeko yokungathathi cala. Emva kokuqala imoto, cinezela iklatshi ukuya esiphelweni, emva koko ubeke iigesi kwindawo yokuqala yegiya. Emva koko uyikhulule iklatshi. Xa ukhulula iklatshi, yenza kancinci. Xa uziva ukuba imoto iyangcangcazela kancinci kwaye emva kokuqala ukuhamba phambili, chulela ipetroli, kwaye kwangaxeshanye, qhubeka ukhulule iklatshi ide ikhutshwe ngokupheleleyo kwaye imoto iqale ngokutyibilikayo. ukutshintsha
Xa sifuna ukunxiba izixhobo eziphezulu, kufuneka sitshatise isantya segigethi ekujoliswe kuyo, emva koko kufuneka songeze umcephe ukwenza isantya sifikelele kwisantya segigethi (umzekelo, xa izixhobo zikwiigiya ezi-5, isantya kufuneka sifike kwiiyadi ezingama-50 okanye nangaphezulu). Xa sele sinyukile, singanyathela kwi-clutch, sibeke izixhobo, kwaye emva koko sikhuphe i-clutch (isantya singanyuswa), kwaye kwangaxeshanye i-throttle igcina ukugcina isantya kuluhlu oluzinzileyo.
Ungasebenzisana njani ne-clutch kunye ne-throttle xa unciphisa kunye nokutshintsha?
Xa ufuna ukwehlisa isitshixo, kufuneka uqale usinciphise isantya. Okokuqala sinyathela iziqhoboshi ukuthoba isantya, yenza i-accelerator ngonyawo lwasekunene, uphakamise unyawo lwasekunene, ukhawuleze ukunyathela kwi-clutch pedal, kwaye uhambise i-lever yegiya kwigiyo ezihambelanayo. , Ukukhulula i-clutch pedal, kwaye ngelixa ukhulula i-clutch pedal, cotha ukunyathela kwi-accelerator ngonyawo lwakho lwasekunene.
1. Isizathu sedangatye lokuqala kukuba i-clutch iphakanyiswe ngokukhawuleza okukhulu.
Xa u-1 ukuya ku-2 engenanto, ayizukucima xa uyiphakamisa, kwaye iya kuqala ukubamba emva ko-2 ukuya ku-3, ke kuya kufuneka uyiphakamise kancinci xa ingu-2.
Xa uphakamisa ukuya ku-2, konyusa kancinci umcephe ngendlela yokunciphisa inani lezitali, (ukufaka i-refueling ngelixa uphakamisa iklatshi) akunampembelelo. Sisiqalo esiqhelekileyo.
2. Amandla egiya yesibini anokunyuka kwiindlela ezisezintabeni, kwaye isantya sinokulawulwa sisiqingatha-sokuxinzelela iklatshi kwizixhobo zesibini. (Kwimeko yejubane elikhawulezayo le-U-turn). Ukuba isantya se-U-turn siyakhawuleza okanye siyacotha, sebenzisa izixhobo ezi-1 ukuyilawula.
3. Isantya silungile kwaye imoto ayizukuma. Ukwehla, cinezela iklatshi, kunye nokukhawulezisa, ukwandisa isantya. Kwiimeko eziqhelekileyo, ukujika kulawulwa ziigiya ezi-2.
Ixesha lokuposa: Aug-27-2020
Bhalisa ku Enquiry:
I-93 Tianyang Road, idolophu yaseFengqiao, isiXeko saseZhuji, kwiPhondo laseZhejiang